Shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo Muqdisho lagu qaban lahaa oo saddex beri dib u dhacay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo Muqdisho lagu qaban lahaa oo saddex beri dib u dhacay
September 9, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Calamada wadamada ku bahoobay IGAD oo Muqdisho la suray.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ayaa saddex beri dib u dhacay, sida ay sheegeen ilo-wareed dib lomaasi oo lagu kalsoonaan karo.
Shirka ayaa la filayay in beri oo bisha September 10 tahay uu ka dhaco caasimada Soomaaliya ee Muqdisho balse hadda waxaa uu dib ugu dhacay ilaa iyo 13-ka bishan September, sida ilo-wareedka sheegeen.
Lama oga sababta keentay dib u dhaca ku yimid shirka, balse wali waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirka hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo ay uga hadlayaan doorashooyinka la filayo in ay qabsoomaan dabayaaqada sanadkan.
Shirka IGAD ayaa la filayaa in ay kasoo qaybgalaan madaxda ugu saraysa sideeda wadan ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD.
Magaalada Muqdisho oo 25-sanno kadib martigelin doonta shirkaas ayaa amaankeeda aad loo adkeeyay.
August 7, 2016 Guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo iclaamiyay wakhtiga ay dhacayaan doorashooyinka dalka
August 19, 2016 Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan la yeeshay wefdi ka socda IGAD
Somaliland will not stay in Puntland territory: cabinet ministers
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland sent a warning message to Somaliland to stop military movement in Sool region, according to a statement from weekly meeting of cabinet. The Puntland cabinet ministers, chaired by President Abdiweli Mohamed Ali, [...]